Inona no hitondrana an'i Bosnia sy Herzegovina?
Tsy misy ny fitsangatsanganana tsy afaka atao raha tsy mividy fanomezam-pahasoavana sy fahatsiarovana ho an'ny tenanao ho fahatsiarovana, ary koa ho an'ny namana sy olom-pantatrao. Matetika ny mpizahatany no miezaka maka zavatra mahaliana sy tsy mahazatra, manavaka fotsiny ny toerana misy azy, toerana izay nananany fialantsasatra tsara ary nahazo fahatsapana maro.
Souvenirs avy any Bosnia sy Herzegovina
Inona no hoentina avy any Bosnia sy Herzegovina , izay tsy azo ividianana any an-kafa, ary inona no ho fanomezam-pahasoavana tokana mampahatsiahy an'io firenena feno loko io?
Ny marika sy ny fahatsiarovana malaza eto amin'ity firenena ity dia:
Tapakila misy firavaka nasionaly, miraikitra amin'ny tanana;
Fanamboarana akanjo am-bifotsy hafa;
vokatra avy amin'ny volon'ondry voajanahary (tapakila, akanjo mafana);
fitaovana sy fitaovana isan-karazany avy amin'ny varahina sy ny volafotsy (takelaka hosodoko, kaopy, sotro, divay, dzhezve - fitaovana ho an'ny kafe);
Fanomezam-boninahitra ny miaramila miaramila (taorian'ny zava-nitranga ara-miaramila, maro ireo cartridges no hita, ary nampiasa tsy fahita firy ny mpanao asa tanana teo an-toerana, nanamboatra vazy, jiro, mofomamy misy kafe.) Sarany amin'ny $ 10 hatramin'ny $ 300;
fahatsiarovana ny toetra ara-pivavahana;
menaka oliva voajanahary, divay ary zava-mamy ao an-toerana.
Tapatapany sy lamba
Kilimosy Bosniaka dia iray amin'ireo fanomezana tsara indrindra sy tsy lafo. Ireo karipetra ireo dia tanana marika mandritry ny volana maromaro araka ny teknolojia iray manokana izay lany tamin'ny taranaka nifandimby. Ny ornament dia mitovy amin'ny moty oriental ary maneho ny endrika geometrika miverimberina sy ny fifandraisana.
Akanjo sy lamba vita amin'ny tranom-patany. Ny brady dia iray amin'ireo singa manan-danja teo amin'ny kolotsainan'ny Bosniaka. Nosoratana tamin'ny vokatra vita amin'ny lamba izy: akanjo nasionaly, lamba famaohana, lamba rongony, karipetra ary zavatra hafa ao an-tokantrano. Ny teknik manokana dia heverina ho bibilava - tarehimarika kely geometrika misy loko manga manga.
Fahatsiarovana ara-pivavahana avy any Bosnia sy Herzegovina
Môtô iray manokana. Any amin'ny toerana iray antsoina hoe Medjugorje , miorina eo amin'ny tendrombohitra masina dia misy ny fiangonana. Indro ny sarin'i Jesoa Kristy. Avy amin'ny lohalika ny rano. Ireo mpizahatany Believer dia matetika mividy mavo no mivarotra eo akaiky, manafoana ny foko an'i Kristy ary mitondra azy ireo ho toy ny fahatsiarovana ho an'ireo olon-tiany.
Any amin'ny havoan 'ny Fenomena dia sarivongan'i Maria Virjiny. Eto ianao dia afaka mividy fahatsiarovana miaraka amin'ny endriny samihafa, endrika sy loko: Figurines (mihoatra ny 2 m ambony), baolina, magnets, labozia, kiraro, t-shirts, kaopy, solomaso, sary sokitra an-jatony, sns.
Ny zava-pisotro misy alikaola Na dia tsy malaza amin'ny famokarana divay aza i Bosnia sy Herzegovina dia azo atao ny mividy zava-pisotro tena tsara eo amin'ny toerana misy azy . Ny populaire dia ny divay "Zhilavka" sy "Gargash". Tandremo ihany koa ny marika "Vranac" (Vranac), satria maro ireo mpihinana divainina no milaza fa tsy maninona ny lohany rehefa manaraka azy. Ny vodka "Rakia", izay vita avy amin'ny voaloboka avy amin'ny varim-bazaha na kavina, dia nahazo laza tsara koa. Ankoatra izany, afaka mividy fanahy miaraka amin'ny fakan'ny orkide karakarazo, izay soso-kevitra hampiasaina mafana. Fanomezana tsy fahita firy ho an'ny mpankafy.
Sakafo . Araka ny fantatrao, 99% ny Bosniaka dia tsy afaka manao izany raha tsy misy hena, noho izany dia afaka mahandro eto izy ireo. Amin'ny maha-fanomezana anao na amin'ny tenanao dia azonao alaina ny sakafon'ny sakafonao na ny sakafonao. Tsy hahita sakafo matsiro sy mahavoky anao mihitsy ianao. Azonao atao ny manajanona ny safidinao amin'ny pastèma (analogue of a basturma Caucasian), prshute na sujuk (ireo sotro feno sakafon'ny henan'omby).
Oliva menaka oliva . Bosnia sy Herzegovina dia malaza amin'ny firenena oliva. Noho izany, aiza na aiza, na aiza na aiza eto, hividy ny menaka oliva tena izy, voajanahary ary matsiro amin'ny vidiny ambany (avy amin'ny $ 4).
Sweets . Ny fankafizan'ireo tia fanatanjahan-tena dia ny fankasitrahana ny fanomezana an-tsokosoko - halva, lukum, baklava, baklava (izy rehetra dia mitovy amin'ny zava-mamy malaza Tiorka). Na mitondra cookie tsy mahazatra miaraka amin'ny famonoana aotomisy sy fanosorana isan-karazany.
Inona no tsy hividy any Bosnia sy Herzegovina:
ny firavaka, satria eto dia avo kokoa ny vidiny raha oharina amin'i Eoropa;
Ny sôkôla sy ny zava-pisotro ihany koa no safidy tsara indrindra, satria ny kalitaony dia tena mediocre.
Aiza no hividianana fahatsiarovana ho an'ny fahatsiarovana?
Any Bosnia sy Herzegovina, misy tsena maro ao an-toerana, mitovy amin'ireo any atsinanan'ny bazaar. Afaka mahita izay rehetra tianao ianao eto. Rehefa mividy, dia mahazatra ny miadaladala, satria ny mpivarotra eo an-toerana dia manaramaso ny vidin'ny vahiny mpizaha tany.
Ao Sarajevo, Bash sy Charshia no malaza indrindra. Akaiky, ao amin'ny araben'i Ferhadia tsy lavitra anao, dia afaka mahita marika sy boutique marika ianao.
Fantatra fa ny atrikasan'ny mpanao hosoka Andar, izay manao kiraro isan-karazany. Izy io dia manakaiky ny moskeo an'ny Emperora.
Eo akaikin'ny moske Begov Jamia dia misy ny fivarotana HBcrafts, izay napetraka ho anisan'ny Tetik'asa Fanampiana ny Refugee "Tradition Knowledge Transfer Center". Ireto misy mpivarotra (avy amin'ny fitaovana ho an'ny kilalao) novokarin'ny vehivavy mpitsoa-ponenana. Ireo mpikarakara ny tetikasa dia mino fa ny asa toy izany dia hanampy azy ireo hampiditra haingana kokoa ho amin'ny fiainana ara-dalàna.
Ny tanànan'i Neum dia fantatra amin'ny maha-ivon-toeran'ny fidiram-bola mahazatra azy, satria eto dia misy lalàna manan-kery kokoa ho an'ny fanondranana vokatra avy any amin'ny firenena.
Raha tianao ny mividy fahatsiarovana sy fanomezam-pahasoavana any amin'ny toeram-pivarotana lehibe, araho amin'ny foibe BBI. Heverina ho iray amin'ireo tsara indrindra any Eoropa izy.
Toerana any Letonia
Gardes de la Vatican
Malta - toetoetran'ny mpizahatany
Endrika amin'ny blaogy amin'ny fahavaratra
Decoupage ny latabatra
Tsy hisy ny fihetsika: ny Prince Charles dia tsy mikasa ny hiaina ao amin'ny Palace Buckingham
Cranberries sy cowberry - toetra mahasoa
Ahoana no ahafahana manangona tsaramaso amin'ny ririnina?
Pangasius dia tsara sy ratsy
Furacilin ho an'ny zaza vao teraka
Lehilahy Taurus - ahoana no handresena ny fony?
25 tsiambaratelo manafintohina ny Apple Corporation, izay tsy noeritreretinao
Sandoka amin'ny sambo mpitatitra
Ny asa tanana amin'ny vato
Schnitzel vita amin'ny henan'alika - sakafo mahazatra, tsotra ary mahazatra isan'andro
Gigi Hadid sy Zane Malik nanaiky!
Fitsipika momba ny fihetsika
Ny fampiasana tsara indrindra ho an'ny gazety